Siyaasi Cabdiweli Nuur Xirsi oo ka hadlay Go’aanki Madaxweyne Gaas ee Imaraadka ku Bogaadiyeey (dhegayso) – Radio Daljir
Siyaasi Cabdiweli Nuur Xirsi oo ka hadlay Go’aanki Madaxweyne Gaas ee Imaraadka ku Bogaadiyeey (dhegayso)
Abriil 22, 2018 5:18 g 1
Dhawaan dawladda Puntland waxay mawqif cad ka istaagtay xiriirka mugdigu siigalayo ee u dhaxeeya dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka, iyadoo Puntland sharraxaday asbaab badan oo lagama maarmaan ka dhigaya baahida loo qabo soo noolaynta xiriirka labada dhinac iyo iskaashigooda.
Xiriir xumadaasi xooggeedu wuxuu soo shaacbaxay kadib markii dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay qabatay lacag ka timid Imaaraadka oo ka degtay garoonka Aadan Cadde, qabashada lacagtaasi oo dhalisay Imaaraadka in ay ku dhawaaqaan joojinta taakulo siintii xagga amniga ee Soomaaliya siiba dawladda dhexe, iyadoo ay ku xigtay dawladda federaalku in ay toos ula wareegto ciidamo uu tababaray imaaraadka, mushaarada siin jiray.
Puntladn oo ka mid ah meelaha imaaraadku gacanta ka siiyo xaggga amniga, kana taageero ciidamada ayaa caddaysay marna in aan loo baahnayn xumaansho xiriir oo dhaxmara Soomaaliya iyo Imaaraadka, kana dalbatay Imaaraadku in ay sii wadaan tababariddii ciidamada Puntland iyo taageeriddii mushaarba.
Haddaba talllaabadaan Puntland qaadatay ma mid u danaynaysa Puntland oo kaliyaa, mise waa mid dani ugu jirto Soomaaliya oo dhan, su’aashaasi iyo kuwo kaleba waxaan waydiinnay Cabdiweli Xirsi Nuur oo ah siyaasi horay Puntland uga soo noqday wasiir kuxigeenka xannaanada xoolaha, kana mid ah dadka sida dhaw ula socda arrimaha carabta.
Puntland Noolow Calabasas at Qaadatay sababtu maxay tahay MA iswaydiiseen jawaabtu WAA MAYA Marka. Aan idib siiyo jawaabta markaad dhisayso ciidan myluxuu u baahan yahay talaabada ugu hireysaysa aad Qaadayso ciidan wuxuu u baahan tahay oo dhan inaad ka haqabtiri karto marka dawlada federaalka haday oranayso ciidanka lacagtaad mushahar u siinayso ANIGA faraha iigu shub anaa dawlada TAA iyagay jidhaa ciidan waa inuu helaa mushahar joogta ah ama rigli si dawlada caqabadkastaa oo hor timaada ugu gudubto Arin waa sidaa NOOLOW HALYEEY Gaas hawsha sidaa u wad